Mogadishu Journal » Qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
Mjournal :-Wararka laga helayo Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in halkasi uu Maanta ka dhacay qarax khasaaro geystay kaas oo jugtiisa laga maqlay Xaafadaha kala duwan ee Magaaladaas.
Qaraxa oo ahaa miinada noocad hulka lagu aaso ah ayaa goobjoogayaal waxaa ay sheegeen in lala eegtay Gaari nooca raaxada ah xilli uu marayay wadada hormarta Hoteelka Boosaas.
Ilaa laba askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Ciidamada Badda Puntland ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay,kuwaas oo dhaawacooda la geeyay Isbitaalka weyn ee Magalada Boosaaso.
Warark ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland ay gaareen halka uu qaraxa ka dhacay,kuwaas oo halkaasi ka sameeyay howlgal aan wax natiijo ah kazoo bixin.
Guddoomiye Najax oo War ka soo saaray howlgalka Shabeellaha Hoose
Nin Kenyaan ah oo lagu dilay magaalada Boosaaso